Nhau - Iyo yechigumi China Steel Raw Materials Market Yepamusoro-kuguma Forum Yakabatwa Pamhepo Inotungamira Yakaderera-Carbon Green Development
Musi wa12 Mbudzi 2021, iyo "2021 (Yegumi) Yepamusoro-yekupedzisira Forum paChina's Steel Raw Materials Market" ine dingindira re "Dual Carbon Goals Leading and Ensuring Resource Security" yakaitwa zvakabudirira pamhepo, chinova chikamu chakakosha chekuvaka. yeindasitiri yesimbi yakasvibiswa pasi pemashure e "dual carbon". Iyo yepamusoro-soro yeindasitiri cheni yekugovera cheni, kuzadzikiswa kwekupa uye kugadzikana kwemitengo, uye kuronga kwesainzi kwebudiriro yehungwaru zvakagadzira chikuva chekutaurirana chakanaka.
Iyi foramu inotsigirwa neMetallurgical Industry Planning and Research Institute, uye China Metallurgical Planning Network inopa tsigiro yemambure kuforamu iyi. Vanosvika makumi matatu vezvenhau vekune dzimwe nyika nevekunze vakateerera zvakanyanya uye vakashuma paforamu iyi. Fan Tiejun, Dean weMetallurgical Industry Planning and Research Institute, uye Jiang Xiaodong, Mutevedzeri weMutungamiriri, vakatungamira misangano yemangwanani neyemasikati zvakateerana.
Iyo China Steel Raw Material Market Yepamusoro-yekupedzisira Forum yakaitwa zvakabudirira kwezvikamu zvipfumbamwe uye yave iyo indasitiri inotungamira yepamusoro-yekupedzisira nhaurirano chikuva. Yakaita basa rakanaka mukusimudzira budiriro, shanduko, uye kuvandudzwa kweindasitiri yesimbi yekumusoro-soro, uye yakagadzira mukurumbira wakanaka muindasitiri iyi.
Luo Tiejun, mutevedzeri wemutungamiri weChina Iron and Steel Association, akapa hurukuro kuforamu iyi uye akakorokotedza foramu iyi akamirira China Iron and Steel Association. Mutevedzeri weMutungamiriri weNyika, Luo Tiejun, akaunza mamiriro ezvese ekushanda kweindasitiri yesimbi munyika yangu uye mashandiro ebhizinesi gore rino, uye zvichibva pamutongo wenzvimbo yekuvandudza yemukati nekunze, kutungamira kwemitemo uye kutungamira kweindasitiri, akaisa mazano matatu pakutevera kusimudzira. yeindasitiri yesimbi yenyika yangu: Chekutanga, gadza Iyo inobudirira-yakatarisana neindasitiri yekuzvibata nzira inochengetedza kurongeka kwemusika. Imwe nzira itsva inofanirwa kuumbwa iyo isingangove ine mashandisirwo emagetsi uye kabhoni emission policy zvipingamupinyi, asiwo ine indasitiri yekuzvibata uye kutonga kwehurumende kunoenderana nemirairo yemusika uye zvinodiwa pamusika. Chechipiri ndechekumhanyisa kuvandudza kwesimbi zviwanikwa uye kuwedzera kugona kuvimbisa zviwanikwa. Nhamburiko dzinofanira kuitwa kuwedzera kuvandudzwa kwezviwanikwa zvemugodhi wemumba, kutsigira zvakasimba kuwedzera nekusimbaradzwa kweindasitiri yezvekudzoreredzwa kwesimbi yekudzoreredza nekudzokororwa, uye kukurumidzisa kuvandudzwa kwemigodhi yemhiri kwemakungwa. Yechitatu ndeyekugadzira nhandare yekutamba uye kusimudzira kurongeka kwemaitiro uye kusimudzira kwemhando yepamusoro. Kuvakwa kwemapurojekiti ekushandisa zvine simba rakawanda uye mapurojekiti akakwira-emissions anofanirwa kuganhurirwa kuumba nzvimbo inokwikwidza ye "kupona kweakasimba uye yakanaka mari inodzinga mari yakaipa", uye kukurudzira kudzora kwakasimba kwehuwandu hwekugadzira kugona uye optimization yechimiro cheindasitiri kuburikidza. kabhoni emissions, simba rekushandisa zviratidzo uye ultra-low emissions, uye kusimudzira indasitiri Green, yakaderera-kabhoni uye yemhando yepamusoro kusimudzira.
Niu Li, mutevedzeri wemukuru weDhipatimendi reEconomic Forecasting yeState Information Center, akaita chirevo chakakosha "Steady Economic Recovery Policy Moderate Return-Domestic and Foreign Macroeconomic Situation Analysis uye Kududzirwa Kwemitemo", kubva pakuona kwemamiriro ehupfumi hwenyika muna 2021, sei nyika yangu macroeconomic budiriro muna 2021, Pane matambudziko mana makuru muhupfumi hwazvino hweChinese, uye tarisiro yehupfumi hweChinese gore rino uye gore rinouya. Inofanotaura mamiriro azvino uye mafambiro emangwana ekusimudzira hupfumi hwemukati nekunze, uye inotarisisa kuongororwa kwezvinhu zvikuru zvinokanganisa maitiro emitengo yezvigadzirwa zvemaindasitiri uye kuwedzera kwemitengo yezvigadzirwa zvemaindasitiri. factor. Mutevedzeri weMutevedzeri Niu Li akati hupfumi hwazvino hweChinese hune hushingi hwakakwana, kugona hukuru uye hunyanzvi hwekutsigira zvinobudirira kukura kwakasimba kwehupfumi hweChina. Kazhinji, kudzivirira uye kutonga kwedenda renyika yangu kuchagadziriswa muna 2021, macroeconomic marongero achadzokera kune yakajairwa, uye mashandiro ehupfumi achaita zvishoma nezvishoma. Unhu hwekuvandudza hupfumi hwekukura uye kusiyanisa kweminda yakasiyana-siyana huri pachena, kuratidza "yepamusoro pamberi uye yakaderera kumashure" mamiriro ezvinhu. Tichitarisira kuna 2022, hupfumi hwenyika yangu huchaenda zvishoma nezvishoma kushanda zvakajairika, uye mwero wekukura kwehupfumi huchaenda kune hunogona kukura.
Mumushumo une musoro unoti "Analysis of Mineral Resources Planning and Mine Administration Trends", Ju Jianhua, Mutungamiriri weDhipatimendi reZvicherwa Dziviriro neKutarisira kweBazi Rezviwanikwa, akazivisa hwaro hwekugadzirira, mabasa makuru uye kufambira mberi kwebasa renyika nemunharaunda. mineral resources kuronga. , Akaongorora matambudziko makuru aripo munyika yangu iron ore zviwanikwa uye maitiro eiyo mineral resource management. Director Ju Jianhua akataura kuti mamiriro ekutanga enyika ezvicherwa zvenyika yangu haana kuchinja, chimiro chavo uye basa ravo mumamiriro ese ebudiriro yenyika hazvina kuchinja, uye kuomeswa kwezviwanikwa uye zvipingamupinyi zvezvakatipoteredza hazvina kuchinja. Isu tinofanirwa kutevedzera misimboti ye "pasi pekufunga, kubatanidzwa kwenyika, kugoverwa kwemusika, kukura kwegirinhi, uye kuhwina-kuhwina kubatana", kusimbisa kuchengetedzwa kwemaminerari akakosha, kukurudzira kurongeka kwekuvandudza zviwanikwa uye kuchengetedzwa kwezvisikwa, uye kuvaka yakachengeteka, yakasvibira, uye inoshanda sosi garandi system. Akataura kuti indasitiri yenyika yangu yesimbi nesimbi inotsigira nzvimbo dzakakosha dzekusimudzira hupfumi nemagariro. Kuti tiwedzere kusimbisa kugona kwenyika neindasitiri yekuvimbisa zviwanikwa zvesimbi, zvinhu zvitatu zvinofanirwa kutariswa mukutsvagisa zviwanikwa zvesimbi uye marongero ehurongwa hwebudiriro: Chekutanga, simbisa kutsvagisa zviwanikwa zvemumba uye kuedza kuwana Kubudirira mukutsvaga; yechipiri ndeyekukwidziridza maitiro ekusimudzira esimbi ore uye kudzikamisa kugona kwekupa kwesimbi ore; yechitatu ndeyekukwenenzvera chimiro chesimbi ore resource kuvandudza uye kushandiswa.
Zhao Gongyi, Mutungamiriri wePrice Monitoring Center yeNational Development and Reform Commission, mumushumo we "Background uye Kukosha Kwekuparidzirwa kwenyika yangu Price Index Management Measures", kududzira kwakadzama kwe "Price Index Behavior Management Measures" yakaziviswa. neNational Development and Reform Commission gore rino (pano inonzi "Matanho" "), yakaratidza kuti kuchinja kwemitengo chinhu chinokosha uye hukama hunokosha hwekugadzirisa hupfumi. Iko kuchinjika, chinangwa uye mhinduro yechokwadi yezviratidzo zvemitengo chinhu chakakosha chinodiwa kuti upe kutamba kwakazara kune rinoita basa remusika, kuvandudza kugona kwekugovera zviwanikwa, uye kukurudzira simba remusika. Iko kuunganidzwa uye kuburitswa kwemhando yepamusoro indices yemitengo inoita basa rakakosha mukugadzirisa uye kutungamira kusimudzirwa kwekugadzirisa mutengo kuumbwa nekuvandudza kunzwisiswa kwezviratidzo zvemitengo. Mutungamiri Zhao Gongyi akati kubudiswa uye kushandiswa kwe "Matanho" kunoratidza hurongwa hwekutarisira mutengo neChinese maitiro, iyo yakakodzera nguva uye inofanirwa kutarisana nemamiriro ezvinhu emutengo wakaoma wezvinhu zvinokosha; haina kungounza indekisi yemitengo yenyika yangu muchikamu chitsva chekutevedzera, asi zvakare Inoisa mberi zvinodiwa uye inonongedza kutungamira kweiyo indekisi yemitengo, uye inogadzira nhanho yemakwikwi emusika wemitengo yepasi uye yekunze, inova huru. kukosha kwekusimbisa hutungamiri hwemitengo yehurumende uye kushumira hupfumi chaihwo.
Yao Lei, injinjiniya mukuru kuInstitute of Mining Market Research, International Mining Research Center, China Geological Survey, akapa mushumo wakanaka une musoro unoti “Ongororo yeGlobal Iron Ore Resources Situation uye Mazano eIron Ore Resources Security”, iyo yakaongorora mamiriro matsva. zvepasi rose iron ore. Kubva pakuona kwemazuva ano, kugoverwa kwepasi rose kwesimbi kuchamhembe uye kumaodzanyemba kwehemispheres kune simba guru, uye kupa uye kudiwa kwemaitiro kwakaoma kuchinja munguva pfupi; kubva padenda, migumo yese yesimbi yepasi rose, marara uye crude simbi kupihwa uye kudiwa kwakaderera; chiyero chepasi rose mutengo wesimbi yakaraswa uye mutengo wesimbi panguva yedenda. iron ore hofori dzichine oligopoly pane yepasi rose iron ore industry chain; iron ore uye simbi yekunyungudutsa simba mumapaki ekunze emaindasitiri ari kuwedzera zvishoma nezvishoma; vatengesi vatatu vakuru vesimbi pasi rose vanoishandisa kekutanga RMB kuyambuka muganhu. Nezve masimbisiro ekuchengetedza zviwanikwa zvesimbi munyika yangu, injinjiniya mukuru Yao Lei akakurudzira kusimbaradza kushandiswa kwakadzama kwemidziyo yemumba nesimbi, kukurudzira mabhizinesi kuti "aende pasi rose" pamwe chete, uye kusimbisa kudyidzana kwenyika dzese.
Jiang Shengcai, Secretary-General weChina Association of Metallurgical and Mining Enterprises, Li Shubin, Director weChina Scrap Steel Application Association, Cui Pijiang, Sachigaro weChina Coking Association, Shi Wanli, Munyori Mukuru weChina Ferroalloy Association, Munyori. weParty Committee uye Chief Engineer weMetallurgical Industry Planning and Research Institute, Foreign Academician of Russian Academy of Natural Sciences Li Xinchuang, kubva mukukamurwa kwemigodhi yesimbi, zvirahwe zvesimbi, coking, ferroalloy, uye maindasitiri esimbi nesimbi, akatarisana nesimbi yepasi rose. ore kupihwa uye kudiwa pasi peiyo mbiri-kabhoni kumashure uye kukanganisa kwayo pakuwanikwa kwesimbi yenyika yangu uye kudiwa, uye ongororo yemamiriro azvino uye maitiro ekusimudzira ezvakasara zvesimbi nesimbi zviwanikwa zvenyika yangu, Indasitiri yekubika inopindura kune maviri-kabhoni. chinangwa chekusimudzira budiriro yemhando yepamusoro yeindasitiri, iyo mbiri-kabhoni chinangwa inosimudzira kusimudzira kwe iyo indasitiri yeferroalloy, uye iyo mbiri-kabhoni chinangwa chinotungamira kuvakwa kwenyika yangu simbi mbishi yekugovera garandi system yekugovana kunoshamisa.
Hurukuro dzinoshamisa dzevaenzi veforamu iyi dzakabatsira nyika yangu indasitiri yezvigadzirwa zvesimbi kuti ibatisise zvinodiwa nemitemo mitsva, kuziva mamiriro matsva ebudiriro, uye kutungamira mabhizinesi muindasitiri iyi kuti ashingaire kuchinjika pamusika, kuronga nesainzi nzira dzekusimudzira, nekuvandudza hunyanzvi hwekuchengetedza zvinhu. uye kugona kugadzirisa njodzi.
Iyi foramu inotarisisa nyaya dzinopisa senge macroeconomic nepolicy orientation, green, low-carbon and high-quality development of the steel raw material industry, yakarongeka uye yakabatana budiriro yeindasitiri ketani, kudyidzana kwenyika dzemigodhi, kuchengetedza zviwanikwa uye dzimwe nyaya dzinopisa. Kuburikidza nekuongorora mamiriro ezvinhu, kududzira gwara, mazano ehungwaru uye zvimwe zvinonakidza zvemukati uye zvakapfuma Zvakakwezva vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvitatu nemazana matanhatu mukamuri yekutepfenyura yepamoyo kuti vaone musangano, kutora chikamu munhaurirano, uye kutaurirana nemameseji. Vatungamiri nevamiriri vezhinji makambani esimbi, makambani emigodhi, uye simbi raw material indasitiri cheni makambani ane hukama, masangano ekutsvagisa, masangano ezvemari, uye masangano anopihwa mari nekunze vakapinda online. Inogona.
Nguva yekutumira: Nov-14-2021